I-CHD kunye ne-COVID-19 - Global ARCH
Global ARCH / Funda nzulu / I-CHD kunye ne-COVID-19
I-COVID-19: Ulwazi oluhlaziyiweyo lweziGulo zentliziyo yokuZalwa kunye neRheumatic
Ulwazi lwe-COVID-19 Vaccine ngolwazi lwezifo zentliziyo kunye nezifo zentliziyo
Iinformación sobre la vacuna COVID-19 para pacientes con cardiopatías congénitas y reumáticas
Landa i PDF
Imiba esemngciphekweni “yohambo olude” lwe-COVID kubantu abanesifo sentliziyo esichongiweyo
Uphononongo olutsha olwenziwa ngabaphandi kwiSibhedlele soTyando oluKhethekileyo (HSS) kwisiXeko saseNew York lubonisa ngaphezulu kwesiqingatha sezigulana ezinezifo ze-rheumatic ezithe zasulelwa yi-COVID-19 ngexesha lo bhubhani kwaye zagqiba uphando lwe-COVID-19, oluye lwabizwa ngokuba “luhambo olude” I-COVID, okanye iimpawu ezinde zosulelo, kuquka ukuphulukana nencasa okanye ivumba, ukuqaqamba kwezihlunu kunye nobunzima bokugxila kwinyanga enye okanye ngaphezulu.
Iziphumo ezibi kakhulu zesiBhedlele zaBantwana kunye nabantu abadala abane-COVID-19 kunye neSifo seNhliziyo esiKhulekayo, epapashwe kuyo I-Cardiology yezilwanyana, 2021. Oku kubonakala kuphononongo lokuqala ukunika ingxelo yokunyuka kwezigulo zesibhedlele kunye neendleko zezigulane isifo senhliziyo esiswini uchatshazelwe yi-COVID-19.
Umngcipheko wokunqamla kwegazi kunqabile kakhulu kwi-COVID-19 kunakwizitofu zokugonya: Abaphandi kwiYunivesithi yaseOxford baxela ukuba umngcipheko wokunqanqatheka kwegazi okwaziwa ngokuba yi-cerebral venous thrombosis (CVT) kulandela ukosuleleka yi-COVID-19 kumalunga nama-100 amakhulu kunesiqhelo, amatyeli aliqela aphezulu kunaphambi kokugonywa okanye kulandela umkhuhlane.
I-COVID-19 kubantu abadala abanesifo sentliziyo esibelekweni: iphepha le-2021 elipapashwe kwi Umbhalo we-American College of Cardiology ebonisa ukuba isifo senhliziyo esiswini Izigulana zokubhubha kwe-COVID-19 ziyafana naleyo yabemi ngokubanzi. Umngcipheko usekelwe kwisimo sempilo kwaye kungekhona ukuxilongwa.
Isifo seCoronavirus 2019 kubantu abadala abanesifo sentliziyo esibelekweni: iphepha lokuma elivela kwiqela elisebenzayo le-ESC yesifo sentliziyo yabantu abadala, kunye noMbutho waMazwe ngaMazwe weSifo seNtliziyo sabantu abadala
Ukugcina impilo yeNgqondo ngexesha lesifo se-COVID-19 -Rehab 4 Addiction, isibonelelo se-intanethi kubantu abajongene nokusetyenziswa kweziyobisi, sishicilele esi sikhokelo semfundo sokwandisa ukuqonda kunye nokwazisa ngokujamelana nokufelwa kunye nokuvalelwa. Ngobhubhane we-coronavirus wangoku, uninzi oluphila noxinzelelo lusokola ukuhlala ludada ngexesha lokuyalelwa okanye ukuzimela
Uzihlamba njani ngokufanelekileyo izandla zakho -Ingcaciso kunye nevidiyo imiyalelo epapashwe ngabaNcedisi abaNesi abaQinisekisiweyo, uMbutho wezeMpilo weHlabathi, kunye neZiko loLawulo lwezifo
I-COVID-19 kwiSifo seNtliziyo seNtsholongwane: Amanqaku alishumi ekufuneka uwakhumbule, ukusuka kwiKholeji yaseMelika yeCardiology, ngoJuni 2020
Ukoyisa i-CHD: Covid 2020: Iindaba zokubuyiswa kwakhona: Ukoyisa CHD uthethe namalungu amathathu isifo senhliziyo esiswini uluntu olwafumana ikhontrakthi kwaye loyisa i-COVID-19 - isigulana esiselula njengoko kwabelwana ngaso ngumama wakhe, isigulana esidala / umfundi wezonyango, kunye nogqirha wentliziyo yabantwana.
Iingcebiso kubantu abaphila nesifo sentliziyo [PDF]Inguqulelo yesiFrentshi]
Ngaba yi-COVID-19? [PDF]
Isikhokelo sobuchwephesha kwi-COVID-19
Isikhokelo sezobugcisa se-WHO
Izifundo ezivulekileyo ze-WHO
Umbhalo we-American Heart Association: Impembelelo yesifo seCoronavirus 2019 (i-COVID-19) kwizigulana ezinesifo sentliziyo esibelekweni kuyo yonke i-Lifespan: Amava eZiko leMfundo lokuZalwa sisifo seNtliziyo esiZweni eNew York City
Ukuphononongwa kwakhona kwabo bonke abantu abane-CHD kulandelwa kwiziko lezonyango laseColumbia Irving kwafunyaniswa ukuba bane-COVID-19 phakathi kuka-Matshi 1 2020 noJulayi 1 2020. Abaphandi bafumanise ukuba inani lezigulana ze-COVID ‐ ze-19 zaziphantsi. Izigulana ze-CHD ezinesifo semfuza kunye nabantu abadala kwinqanaba eliphambili lomzimba babesemngciphekweni omkhulu wokusuleleka / ukosuleleka ngokuqatha.
Ijenali yamayeza onyango: I-COVID-19 kunye nesiGulo seNtliziyo seNtsholongwane: Iziphumo ezivela kuPhando lweLizwe liphela
Isiphelo: Ngaphandle kweengxelo zangaphambili ezikhomba kwinqanaba eliphezulu lokufa kwabantu kwizigulana ezinesifo sentliziyo, siqwalasele ikhosi yeklinikhi ye-COVID-19 kwiqela lethu lezigulana ze-CHD. Nangona ezi ziphumo kufuneka ziqinisekiswe kwii-cohorts ezinkulu ukuphanda ngeendlela ezisisiseko, iziphumo zamanani asezantsi eengxaki zentliziyo kwaye akukho kufa kuyaqinisekisa kwizigulana ze-CHD. Qhagamshela kwi-abstract
IiJenali zeBMJ: Isifo sentliziyo sabantu abadala kunye nesibetho se-COVID-19
Abantu abadala abanezifo zentliziyo yokuzalwa (ACHD) banokuba semngciphekweni omkhulu kwimeko ye-COVID-19. Ngenxa ye-heterogeneity ye-ACHD kunye neengxaki zesekondari, iiprofayili zomngcipheko, nangona kunjalo, azifani. Olu xwebhu lujolise ekunikezeleni isishwankathelo sedatha efanelekileyo kwaye sichaze indlela yethu ebambekayo kuthintelo nolawulo lwezifo. Ngokusekwe kwi-anatomy kunye nezinto ezongezelelekileyo zomzimba kubandakanya iimpawu, amandla omthambo, ukusilela kwentliziyo, uxinzelelo lwegazi kwimiphunga kunye necyanosis, sicebisa indlela ebambekayo yokubeka izigulana kumngcipheko ophantsi, ophakathi kunye nomngcipheko ophezulu. Qhagamshelana nesicatshulwa
Ijenali yonyango lweklinikhi, nge-1 kaJuni 2020 (inani labemi base-Italiya): I-COVID-19 kunye nesiGulo seNtliziyo seNtsholongwane: Iziphumo ezivela kuPhando lweLizwe liphela
Isiphelo: Ngaphandle kweengxelo zangaphambili ezikhomba kwinqanaba eliphezulu lokufa kwabantu kwizigulana ezinesifo sentliziyo, siqwalasele ikhosi yeklinikhi ye-COVID-19 kwiqela lethu lezigulana ze-CHD. Nangona ezi ziphumo kufuneka ziqinisekiswe kwii-cohorts ezinkulu ukuphanda ngeendlela ezisisiseko, iziphumo zamanani asezantsi eengxaki zentliziyo kwaye akukho kufa kuyaqinisekisa kwizigulana ze-CHD.
Umbhalo we-American College of Cardiology: Tsalela umnxeba kwi-COVID-19 yaMatyala eKliniki
Umyalezo ovela kwi-Congenital Heart Public Health Consortium (i-CHPHC): Kwiinzame zokunceda ukwazisa kunye nokufundisa uluntu lwethu kwezonyango ekuphuculeni ukhathalelo lwezigulana olunxulumene nobhubhane we-COVID-19, i-JACC: IiNgxelo zeNkundla zinika indlela yokupapashwa yokwabelana ngolu lwazi ngokukhawuleza Uphengululo olwenziweyo. Ababoneleli ngaphambili bayakhuthazwa ukuba Ngenisa amava abo kwiimeko ze-COVID-19 kunye nokubandakanyeka kwentliziyo kwijenali ukuze iqwalaselwe.
Yazisa izifo zesifo sentliziyo (InformCHD): Ukoyisa i-CHD kuzibophelele ekufundeni ngakumbi malunga nendlela i-COVID-19 echaphazela ngayo abo banesifo sentliziyo. Idatha ekhuselekileyo ye-InformCHD uya kuqokelela ulwazi ngokuthe ngqo kubantu abanesifo sentliziyo. Uphando alukabikho ngoku. Bonke abantu abanesifo sentliziyo (okanye abanonopheli babo), nokuba bangakanani na ubudala okanye uhlobo lwe-CHD, baya kuba nakho ukuthatha inxaxheba. Ukoyisa i-CHD kukwabonelela nge Uhlaziyo lweveki nganye lwe-COVID-19.
Ukwandiswa kwe-ventricle yasekunene yinto ephambili yokufa phakathi kwezigulana ze-COVID, isifundo esitsha sifumanisa
Ukwandiswa kwe-ventricle elungileyo yayikukuphela kokwahluka okunxulunyaniswa nokusweleka kweli qela lezigulana zeCovid-19, ngokophando, olwamkelweyo ukuba lupapashwe kwiJenali yeAmerican College of Cardiology. Funda ngokugqithisileyo
Isifo seKawasaki kunye neCovid-19: Ii-FAQ
Ubhubhane we-COVID-19 wangoku, iingxelo ezivelayo kunye nezilumkiso ezivela eYurophu, kunye neengxelo kumajelo eendaba, ziphakamise uninzi lweenkxalabo kunye nemibuzo malunga nokunxibelelana okunokwenzeka okanye umanyano phakathi kosulelo lwe-COVID-19 kunye nesifo seKawasaki ebantwaneni. Isifo i-Kawasaki Disease Canada sizimisele ukucacisa nokutolika olu lwazi ukubonelela abaguli, iintsapho kunye noluntu ngokubanzi ngolwazi oluluncedo nolusebenzayo oluza kuhlaziywa rhoqo. Funda ngokugqithisileyo
Isifo sentliziyo esibelekayo kwiQumrhu lezeMpilo likaRhulumente: Ulwazi malunga nesifo se-coronovirus (i-COVID-19) kunye nesifo sentliziyo
Isiseko sentliziyo yaseBritane: ICoronavirus: kuthetha ntoni kuwe ukuba unentliziyo okanye isifo sokujikeleza
Umbutho wezeMpilo kwiHlabathi liphela: Isifo seCoronavirus (i-COVID-19) ingcebiso kuluntu: Iintsomi ezi-bust
Umbutho wezeMpilo kwiHlabathi liphela: I-Q & A kwi-coronaviruses (COVID-19)
Umbutho weNtliziyo yabantu abadala (ACHA): I-COVID-19 (Coronavirus): Ithetha ukuthini kubantu abadala abanezifo zentliziyo ezizelwe
Umbutho waseYurophu weCardiology: I-COVID-19 kunye nezigulana zentliziyo (i-Q & A)
Ukusuka kwi-Congenital Heart Public Health Consortium (CHPHC): Ngesi siza Abantwana bePhepha.org, IAmerican Academy of Pediatrics ibonelela ngengqokelela yamanqaku ekuphenduleni ubhubhane we-COVID-19 ovela kwisiNgesi naseSpanish. Ukongeza kwifayile ye- iphepha eliphambili le-COVID-19, I-COVID19 Ingcaciso ngeeNtsapho zaBantwana noLutsha ezineeMfuno eziKhethekileyo zezeMpilo iyafumaneka.
Isiseko seNtliziyo yaBantwana: Iiseshoni ze-Q & A kunye noGqr John Costello noJennifer Romano.
Ukoyisa uhlaziyo lwe-CHD COVID-19 Ukuphendula i-COVID-19, Ukoyisa i-CHD kubonelela uluntu lwayo ngezixhobo ezithembakeleyo ezivela kwimithombo yeengcali. Oku kubandakanya: Yazisa iCHD